Ipod-ka waxaa la alifay 1979 | Ragga Stylish
British Kane Kramer wuxuu ahaa naqshadeeyaha asalka ah ee ipod. Saaxiibkiis Kramer wuxuu abuuray qalab la yiraahdo IXI sanadkii 1979, oo awood u leh inuu ciyaaro 3,5 daqiiqo oo muusig ah.
Sanadkii 1988 wuxuu ku guuldareystay inuu helo maaliyaddii loo baahnaa si uu u cusbooneysiiyo patentkiisa qalabkiisana waa la ilaaway. Hadda Apple ayaa isaga u timid si uu uga adkaado dacwaddiisa Burst.com ee ku saabsan sirta iPod-ka. IXI waxay u adeegi doontaa inay muujiso in Apple uusan ka soo xadin alifaadka ka yimid Burst.com, laakiin uu ka xaday Kramer.
Kramer Kramer ayaa qirtay Daily Mail: “Waxaan ku sawiranayay jaranjarada dusheeda markii haweeney ka tirsan Apple oo leh lahjad Mareykan ah ay isoo wacday iyadoo leh waa madaxa waaxda sharciga waxayna dooneysaa inay qirato shaqadii aan qabtay. Waa inaan qiraa in markii hore aan moodayay in asxaabteydu ay i caayaan. Laakiin xoogaa waan wada sheekaysanay, aniga oo jaranjarada dusheeda jooga wax yarna iga fajacsan wax walba, waxayna ii sheegtay in Apple ay doonayso inaan imaado California si aan ula soo hadlo. Waxaan ku qasbanahay inaan war ka bixiyo weriye maxkamadeed iyo sawirqaade ka shaqeeya xafiisyada qareennada. Weydiinta qareenka Burst wuxuu ahaa mid adag, toban saacadood. Laakiin waan ku farxay inaan sameeyo.
Waqtigaan la joogo, Apple waxay isaga siisaa dhibaatada ka haysata safarka uu ku tagayo Kalifoorniya iyo Kramer waxay kala xaajooneysaa magdhawga wixii kale oo dhan. Wax kasta oo kale waa, gaar ahaan, in Apple uu wax ka ogaa jiritaanka IXI, ogaa inay ahayd patent ka hor iPod, wuxuu ogaa in qoraagu yahay Kramer, wuxuu bilaabay inuu kasbado malaayiin cantoobo mug leh iPod wuxuuna kaliya xasuustay Ingiriiska inuu ka takhaluso maxkamad ka qaalisan. Waxaan rajaynayaa oo kaliya Kramer inuu helo wax walba oo uu hadda ka heli karo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Waqtiyada firaaqada » IPod-ka waxaa la alifay 1979
Shabakada be s ha ahaato sidii ay ahayd imbento, taas oo ah shabaqa noqda labo labo, si ay u noqoto tilmaamaha fucking